Dhismaha The in ay kala firdheen, laga yaabaa | Apg29
Macna ma laha inta qof hodan ah sidaas darteed waa "leh" ayuu oo kaliya meel bannaan oo ku gateen yar kaydinta ee nidaamka kombiyuutarka ah.
"Jooji lacag caddaan ah iyo noqdo Cash Smart!" at dhan khasaare for ganacsiga. Waxa keliya bangiyada hunguri weyn ay ka faa'iideysan ka.
Dhismaha meesha American Express oo xaruuntiisu tahay New York ayaa magacyo kala duwan. Saddex World Financial Center, American Express Tower, iyo ka dib 200 Vesey Street. dhismaha waxaa loogu talagalay by dhise Cesar Pelli oo dhamaystiray 1986. Waxaa burburay intii September 11 weerar oo ku meel gaar ah ayaa la daadgureeyay dayactirka. Waa qayb ka mid adag dhismaha, Xarunta Financial World yahay. Markii hore, albaabka soo socda si ay mataano munaaradaha World Trade Center jir. 1993 qarxiyay bam ee Xarunta Ganacsiga Adduunka ee mid ka mid ah munaaradaha oo mataano ah. Waxa uu ahaa isku day fashilmay oo ay argagixisada ka mid ah ilaa munaaraddii kor u helaan inay burburto oo dhinaca kale ah.
Sida cajiib waa in dhismaha American Express oo hore ahaa xarunta natiijada oo ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale bangiga musallif Lehman Brothers. Lehman Brothers ayaa waxaa la wareegay ka dib markii kicitaan ee bangiga Barclays ee dalka Britain. Haddii halkii lagu faray ama lagu aaddiyo weeraro argagaxiso oo American Express ayaa laga yaabaa in ay ahayd qaylo ah. American Express kuwaas waa shirkadaha card hodan. Waxaa laga yaabaa in ay ahaayeen xaaladaha khatarta ah mar dambe la hodan tan iyo lacag ay digital pura aadi lahaa waayo olole ay suurtagal tahay isku dubaridan oo cabsi ka dhan ah bangiyada, xarumaha xogta iyo shirkadaha kale ee dhaqaalaha.
In dunida listicmaalka jira oo dhan "siman". xisaabaadka listicmaalka waa computationally siman.
Dhismaha The in ay kala firdheen yaabaa badiyay $ 100 on burburkii listicmaalka ah halka "Richard Rich" lumin laga yaabaa malaayiin. Waa in la la gogo 'oo warqad barbar dhigi karaa on kaas oo u sheegay in sida badan qofka iska leh. cajaladood Paper loo qori karaa oo dhinaca kale ah, laakiin xisaabaadka computer-ku salaysan yihiin masiibo listicmaalka iyo bangiyada a gebi ahaanba aan waxtar lahayn. Macna ma laha inta qof hodan ah sidaas darteed waa "leh" ayuu oo kaliya meel bannaan oo ku gateen yar kaydinta ee nidaamka kombiyuutarka ah. Cash iyo gaar ahaan dahab iyo lacag, si kastaba ha ahaatee, saamiyeed si ay wajiga, jidhka iyo qiimaha dhabta ah.
oo waxay lahayd hoos qaar ka mid ah xaaladaha kale (bombo ah ama diyaarad) suurtagelin in la helo mid ka mid ah Towers ee mataanaha ah (si kas ah ama si kama ah) si ay u dhacaan dhanka iyo burburin Express American ah Tower? Waa maxay itimaalka in diyaaradaha argagixiso afduubtay (si kas ah ama si kama ah) ah ayaa awood u yimid wankii xarunta American Express meel ka mid ah mid ka mid ah munaaradaha mataanaha ee World Trade Center? Sidee saameyn ku lahaa on American Express, macaamiisha credit card, dunida iyo aragtida kontantlösheten? Qoraaga aan la soo baxday si ay uga jawaabaan mid ka mid ah su'aalahan laakiin si ay u dhigay. Wax kasta oo ay muujinaysaa sida ay u nugul nidaamka listicmaalka dhexe isaga iyo xafiisyada madaxa galmo iyo xarumaha xogta.
Waa maxay habka mendacious in aad iskaaga u muujiyaan!
Halkan tusaale yar ka dhawr sano ka hor wargeyska fiidkii ah, halkaas oo labada wargeys iyo Riksbanken ka qaldan isu muujiyo iyo jarjartay akhristayaasha. Waxa ay ahayd in Aftonbladet September ee la soo dhaafay 2010 article ayaa sidoo kale ka akhrisan kartaa in lacag caddaan ah run ahaantii kordhay ilaa sanadkii 2008, si kastaba ha ahaatee, waa hawl xiiso leh. Inta kale waa dacaayad. "Bank National waxay aaminsan tahay in kaararka deynta way tartamayaan rabadh iyo lacagta birta ah" wargeyska qoray. Wargeyska The qasan ah in lagu bilaabo u badan tahay fikradaha of credit iyo kaararka deynta halkan.
Wakiil ka socda Baanka Qaranka ayaa tilmaamay in lacagta lahaa sano dhacay ee orodka. Tani waxa ay ahayd in maalmood marka konton kalluun
ahaa oo ku saabsan in ay baaba'aan. In kasta oo xaqiiqda ah in maqaalka lahaa in ay bartaan in ay tahay Baarlamaanka in buriyaan doonaa lacagta birta ah iyo Riksbanken in badala nidaamka lacag bixinta si aad u hesho maqaalka aragti ah in isbeddelka xaddiga lacageed ee waa horumar go'doonsan lama filaan ah. Tan iyo waqti in, bangiyada, siyaasiyiinta iyo Riksbanken ku hubiyeen in ka saarida lacagta caddaanka ah feedhkii bir ah go'aanka baarlamaanka, khalkhalgelinta iyo propagada. Tani waa sida denbiyada abaabulan lahaa "saadaaliyo" in ay jiri doonaan dembi badan, ka dibna tag oo u fuliyaan dambiyo ah in hore ay ahaayeen "saadaaliyay".
Akhristaha u malayn kartaa in aan buurta a samaynta out of il. Laakiin qaybtan yar waxaa sidoo kale loogu tala galay sida cashar akhriska adag. runtii waa maxay? Ma runbaa? Sidee ku saabsan isku dayaya in ay isku dubaridi akhristaha? Sidaas daraaddeed mid had iyo jeer ka akhrisan waa in si looga fogaado in la dhacay nin. Ka dib markii article kasta oo aad ka akhrisan waa yaab xasilloonida shan daqiiqo in waxa ku qoran runbaa. Inta aad ka dibna iyada oo loo marayo falanqayn aan aad u qoto dheer si ay u soo gunaanadi karo, in uusan. Ma aha wax adag in la saadaaliyo mustaqbalka marka aad naftaada u abuuro.
Wax waa in la soo sheegnay waa "play erayada" in isticmaalka dacaayad listicmaalka. Waxay ku yidhaahdeen lacag oo lacag la'aan ah maxaa yeelay waxa ay u muuqataa dheeraad ah oo wanaagsan oo aad hesho lacag kaash ah si ay u muuqdaan sida wax u dhow cudurka daacuunka cudurka. Aniga qudhayduba waxaan ku arkay iyada oo Bluff iyo mar walba isticmaal listicmaalka erayga. Waxa uu u dhigmo farqiga u dhexeeya erayada lagu wadaa kursi oo kursiga curyaamiinta. Laakiin hadii kan danbe, afka ayaa wanaagsan isku baddalay.
Faa'iidada kaliya wax ku ool ah in ay leeyihiin ordvrängeriet oo isticmaalaya erayga lacag caddaan ah oo lacag la'aan ah waa haddii aad hadda rabto in aad eegto xagal fiican macluumaadka listicmaalka (akhri dacaayad). Markaas waxaad ka raadin kartaa listicmaalka erayga halkii listicmaalka. Aware dabcan in badan oo la mid ma aha taageerayaasha listicmaalka rogay ayaa sidoo kale mararka qaarkood u isticmaali listicmaalka erayga.
kaftan A waa in ay isticmaalaan erayga English lacag caddaan ah (lacagta caddaanka ah) marka Dhab ahaantii ay gabi ahaanba waa technology listicmaalka. Best of kufsiga afka Swedish waa ku filan, Swedbank iyo kuwa kale sida Bank isticmaalo erayga lacag caddaan ah xariif ah. Halkan waa xigasho ka ahaatay website Swedbank ee.
"Waa maxay sababta aan ka debit card aad qaadato lacag marka aad dukaanka at dukaanka. Markaas ma waxaad yeelan doontaa tigidh oo dheeraad ah si ay bangiga. Waxa kale oo aad lacag kala bixi kartaa ATM. Laakiin mana aha sidii lacag caddaan ah xariif ah."
Mid ka mid ah, haddii ay suuragal tahay, xitaa ka sii badan doqon call internetka dhameystiraya dumspråket.
"Jooji lacag caddaan ah iyo noqdo Cash Smart!"
Of sababaynta, mid ka mid fahmi karaa in ay jiri doonaan lacag caddaan ah smart waa in la isticmaalo lacagta caddaanka ah sida ugu macquulsan ama la doorbidayo ma jiro haba yaraatee. Iyada oo ay taasi erayga ordlogik xun jimicsi lahaa celceliska xariif ah inuu u dhaqaaqo sida ugu macquulsan. In suuqii cunto isu soo goosanaysa doonay inuu dilo. Eeg sida aad isku dayaan in ay na xukumid af?
Yaa waqti in ay ka baxaan lacagta qadada?
Ha noo celi oraah Swedbank ee qaybta hore.
Waxaad kama hadlaan in halkii ay ku waayi kale mar waa in diiqayaa soo bixid badan by qaadashada lacagta ee dukaanka ama iibiyo mashiinka. Baanka ayaa inta badan waa soo dhow dahay heshiis. At mashiinka ATM iyo kaydiso waxa kale oo safafka. At bangiga noqdo safafka gaaban iyo counters bangi yar in badan oo aad u maamulaan si isku dubaridi dadka in ay ka baxaan lacag meelo kale. Mana waxaa loogu tala galay in loo baahneyn isagoo si ay u iibsadaan pack a of xafaayadda ee dukaanka oo lagu qaado wareegsan oo kaliya si aad u hesho lacag kaash ah. Inta badan ee dadku bilaabaan inay soo iibsadaan bar nacnac ah ka dibna weydii 200 karoon oo lacag caddaan ah, cowdo ayaa in ka badan waxa uu helo dukaamada, oo waxaa dhab wax sax ah. "Warbaahinta ayaa bangiyada" xafiiska sanduuqa waa
"Jooji lacag caddaan ah iyo noqdo Cash Smart!" at dhan khasaare for ganacsiga. Waxa keliya bangiyada hunguri weyn ay ka faa'iideysan ka. Nasiib darro, waxa sabab in ganacsiga u ekaa on kaararka deynta. Waxaa ugu haboon in ay ka baxaan lacag caddaan ah ee bangiga. Markaas at fiican ee aad keeni kartaa dheeraadka bisha buuxda ee hal mar.
Nasiib darro, saacadaha bangiga furitaanka iyo helitaanka counters bangiga muddo dheer loogu tala galay in dadka ka shaqeeya lahaa dhibaato naftaada waqti in ay ka baxaan lacagta qadada ama ka dib shaqo. Inta badan, bangiga uu leeyahay oo kaliya hal counter ah bangiga halka ay ugu fiican ee ugu macquulsan in ay ka baxaan lacag caddaan ah waa. Markii hore waxaa jiray laba ama saddex. Tusaale ahaan, dukaamada cuntada, waa wax iska cad in ay lacag kaash ah oo dheeraad ah ka furi doonaa marka uu jiro safka dheer. Maxaad bangiga ha isku mid ma samayn lahaa? shaqada dheeraadka ah ee bangiga sidoo kale waa faa'iido haddii ay wax soo kabtaan ama wahsasho.
The dhibaatooyin lacag ku noqday bangiga macnaheedu ma aha in mishiinka ATM iyo heshiiska waa fursad wanaagsan. Waxa kaliya muujinaysaa in aad og gacanta dhibic oo dhan meesha. Aan ugu yaraan waa ka bixitaankii of bangiga ammaan ah. Sidoo kale waa in aan dhicin in ay siyaasadda yar suuqa shaqada, dad wanaagsan oo leh maalin gaaban shaqeeya iyo qado dheer shaqayn lahaa, ka dibna arrimaha lagu samayn kari lahaa. Maxaa ku dhacay in maalinta sextim- jeediyay March kasta?
shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay
Yaa ma laha marar badan arkay nin ama naag in dharka madow siday ku wareegsan bacaha ammaanka culus lacag caddaan ah. taariikhda Corporate yihiin mawduucyada la wareegidda iyo midoobaan. Mid ka mid ah tusaale ahaan waa ABAB ah shirkad amniga (la aasaasay 1964) ka dib dhowr sano ka noqday Partena Security. Partena Security ayaa markeeda iibiyey Sodexho (France), Falck (Denmark) iyo Group 4 Securicor (UK).
Group 4 Securicor waxaa laga yaabaa in si fiican u yaqaan hoos G4S gaabinta iyo shirkadda saldhig lacagta caddaanka ah ee Sweden waxaa dhacay boobin helicopter. shirkadda British, G4S waa shirkadaha ammaanka ugu weyn. Caalami, shirkadda ka shaqeeya in ka badan 100 wadan.
Shirkadda waxaa loo qaybiyaa dhowr hawlaha-hoosaadka.
Si weyn loo yaqaan xaruuntiisu Securitas ee Stockholm oo ka shaqeeya wadamo badan. Shirkadda ayaa dhowr magacyada iyo la aasaasay 1934 in Helsingborg by Erik Philip-Sorensen sida waardiye Hälsingborgs. logo wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah saddex dhibco cas turjumaya daacadnimo, feejignaan iyo caawinta. Waxay ahayd Melker Schörling, kuwaas oo ku dhawaad ​​1990 sameeyey Securitas caalamka. Qiyaastii Warega of Millennium, Securitas kor u soo iibsataa labada shirkadood ammaanka Mareykanka weyn Pinkerton iyo Burns.
Securitas kala jabeen markii aasaasihii ka iibiyey laba wiil si. Waxaa hadda loo yaqaan G4S waa qayb ka mid ah oo ajnabi ah "Securitas Wiilashii dhaxal ahaan" (akhri gadashada). G4S la odhan jiray ee Sweden horaantii Falck Security. Waxay lahaa xaruntiisu tahay magaalada Falck Hall ee Stockholm. Falck Security la og yahay ee la xidhiidha kiiska maxkamadda loo yaqaan goal Falck ama gool Cam ah. Tani waxa ay la xidhiidhaa laaluushka iyo gaadiidka Stockholm.
lagu asal ahaan Loomis dib u ogan karo marka Lee American ah Loomis aasaasay Cleary Creek Comercial Company taasoo ay saarnaayeen dahab iyo sahayda ee Alaska. Shirkadaha Loomis gaadiidka la gawaarida gaashaaman (horeysay adduunka ee ahaa mid ka mid ah) ka Wells Fargo kor iibsaday ganacsi la mid ah. In 2000 hore ka mid ah shirkad lagu soo biiray Securitas. Loomis waa sidaas oo asal ahaan shirkad Maraykan ah mustaqbalka noqday shirkadda Securitas ah.
Shirkadda maaraysay lacag caddaan ah labada ugu waaweyn marka la eego wareegga hadda waa Loomis iyo Nokas Norway. qayb aad u badan oo ka masuul ah lacag caddaan ah ee la taaban karo iyo maamulka waxay leeyihiin laba
deriska. Norway iyo (sida aan mar dambe kitaabkii arki doontaan) Finland by Sweden u ogolaanaya a privatized mintiyada Finnish soo saaro lacag caddaan ah Swedish. Waa waali ah ma u leedahay in si buuxda gacanta ugu heer qaran iyo heer gobol ka badan lacag caddaan ah iyo iyada oo loo marayo Sweden.
Nokas waxaa la aasaasay sanadkii 1987 sida Guard Service of Heine Wang. Hawlaha lagu sameeyo ugu horrayn ee dalalka waqooyiga Yurub iyo xaruuntiisu tahay Tønsberg. Nokas Reserve ee Gothenburg markii hore loo aqoon Skandia Reserve. maaraysay lacag caddaan ah Nokas in Sverge horey loo yaqaan G4S. Nokas sidoo kale leeyahay ee 1995 aasaasay Swedish Bevakningstjänst (SBT), kaas oo noqday shirkad ammaanka saddexaad ee ugu weyn ee Sweden. maamulka qadaadiic waxaa inta badan gacanta ku haya ganacsiga yar yar. Sweden ayaa ku lug lahaa tiro badan oo lacag caddaan ah oo adduunka ah. oo dhan
Sidaa darteed lulataa gudaheedana sinaba uma ay ku xiran, Securitas, G4S-Falck Loomis- Nokas.
Mararka qaarkood lulataa shirkadaha ammaanka iyo waxay Been Abuuran wada. Kjell Lindskog aasaasay 1995 shirkadda Qube System Security SQS. Lindskog abuurtay bac ammaanka khad iyo korontada ah oo uu shirkad ahaa kii ugu horeeyay si ay u isticmaalaan. technology Ammaanka ayaa waxaa ka mid ahaa GPS iyo koodh ee khad ah. Lindskog ayaa sidoo kale dhisay baabuurta tartanka iyo been abuurtay Lahjadaha of weecinaayo tennis iyo ulaha barafka. Baadhitaanka ayaa shirkadaha iyo xiriirka labada dhinac ayaa dhab ahaan ahayd yar wareer akhristaha siday ahayd for qoraaga bilowgii.
The basaska siday trumpeting lacag caddaan ah fidin shubhooyin xarfaha waaweyn in tani ay tahay baabuur ka Securitas iyo Loomis. Waxaa dabcan xayaysiin lahaa magaca shirkadda ay. Laakiin lacag caddaan ah gobolka oo dhan caafimaad loo isticmaali karo in baabuur kubad dhex-dhexaad ah oo aan ku sawiri qudhiisu doonayo in dareenka dadka. Qofna ma aha in dhab ahaantii arko haddii ay jiraan waa van ammaanka ama gaari ay ka buuxaan sanduuqyada midhaha. Shaqaalaha aan u baahan doono in ay dharka shaqada leh wax kasta oo magaca shirkada maaraysay lacag caddaan ah lagu calaamadeeyay. Waxay noqon waa in ay awoodaan in ay isu aqoonsadaan hab amaan ah. Tan iyo barashada dukaamada ugu dhakhsaha badan aqoonsadaan iyaga u gaar ah "nin lacag caddaan ah." saddexaad horumar A noqon lahayd in ay dib u dhigi bacaha yar oo dheeraad ah oo dhexdhexaad ah iyo "aan la arki karin".
Waxaa jira waxyaalo badan oo ka tirsan howlgalka basaas nolosha dhabta bartaan. Halkee orod ma aha agagaarka in gawaarida sports cajiib ah la James Bond. baabuurta waa on baxsan gaariga aan waxba galabsan qoyska laakiin daboosho hadheeyay motor ah marka la eego mishiino buuxa fuliya oo si wanaagsan loo daryeelay. Ma macnaheedu ma aha inaad had iyo jeer la wado agagaarka lacagta caddaanka ah ee baabuurta caadiga ah. basaska waa dabcan sida caadiga ah ka badan oo wax ku ool ah. The hawlgallada lacagta caddaanka ah dowladda keliya ee loogu ogolaado inuu xitaa dhaqaale ahaan jebin, laakiin gobolka waa in dabcan diyaar garow in si deg deg ah
durto lacagta cusub haddii loo baahdo. Baananka ayaa waxaa looga hortagi lahaa isticmaalka nidaamka maamulka lacagta, taas oo dhacay ka hor.
EMV - "Nooca skulls"
EMV heer caalami ah oo dhan lacagta kaarka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa lacagta mobile telefoonnada gacanta ku jira technology la mid ah. Noocyada kale ee technology lacagta mobile la mid ah EMV. Heerka laga yaabaa in magacyada kala duwan ee dalal kala duwan iyo sidoo kale khuseysaa technology contactless meesha reading waa meel fog ka soo aqriyaha kaarka. Heerka wuxuu u baahan yahay labada smartcards joogto ah iyo technology contactless isku mar ka shaqeeya. Waxaa jirta waddo si aad u hesho ka kaararka karbaash magnetic iska. EMV u taagan tahay Europay, MasterCard iyo Visa kaas oo ahaa shirkadda in asal ahaan horumariyo heerka. technology markii ugu horaysay la isticmaalo ee France, 1992.
In card EMV karbaash ah magnetic sidaas mar walba bedelay chip oo PIN waxaa loo baahan yahay. code ayaa loo gelin karaa mid via akhristaha kaarka, via bandhig yar oo ku saabsan kaarka ama la isticmaalayo marka la eego software "keyboard isku dhafan" kaydsan card soo bandhigay qalab la akhriyey ah. MasterCard iyo Visa ciidamada iibiso shirkadaha in technology this cusub by ganacsatada isticmaalaya magnetremsetekniken hore lagu qabtay dhaqaale ahaan mas'uul ka xaaladaha musuqmaasuq. Tani ayaa strangely ma aqbalo by United States dalka kaliya ee adduun ee. Visa ku hawlanayd in ay dardar-guurka si technology EMV ee dalka Mareykanka oo ay ku jiraan
18 EMV - "Nooca skulls" wax la yidhaahdo Barnaamijka Inovation Technology. Certification waxaa lagu fuliyaa by wax la yidhaahdo EMVCo.